विप्लवको पार्टीले नै बनायो कार्बाहीको हिट लिस्ट, को-को छन् निशानामा ? पढ्नुहोस्::Nepal's Online News Portal
विप्लवको पार्टीले नै बनायो कार्बाहीको हिट लिस्ट, को-को छन् निशानामा ? पढ्नुहोस्
काठमाडौँ, २५ पुस । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले माफियालाई कार्बाही गर्ने भन्दै लिस्ट तयार परेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी रुकुमले शैक्षिक माफियाको लिस्ट बनाएर कार्बाहीको तयारीमा गरेका हुन्।
एक बटुवाले भने, ‘यो गाउँमा खासै विप्लवको प्रभाव नभए पनि केही सदस्य त होलान् तर धेरैजसो छिमेकी जिल्ला रोल्पा, थवाङलगायत क्षेत्रबाट आएर वाल पेन्टिङ गरेको देखिन्छ ।’ महत, कार्की, रुकुमकोटलगायत क्षेत्रबाट थवाङ, घर्तीगाउँ नजिकै पर्छन् ।